काठमाडौं – ‘दाम्मी, वा दाम्मी !‍’ वसन्तपुरकी नितु महर्जन मीठो लागेर चिच्याउँदै थिइन् । नजिकै रहेका रमेश भण्डारी ‘क्या मीठो! राम्रो ठाउँ बताइदियौ यार,’ भनेर साथी विक्रम महर्जनलाई धन्यवाद दिँदै थिए ।
गोरखाका २६ वर्षीय सागर गुरुङले दुई सातायता काठमाडौंको वसन्तपुरमा चकलेट पानीपुरी बिक्री गर्दै आएका छन् । सम्भवतः नेपालमा चकलेट पानीपुरी बेच्ने सागर पहिलो व्यक्ति हुन् । चकलेट पानीपुरी खान पाएकोमा खुशी व्यक्त गर्दै थिए, नितु र रमेश ।
अष्ट्रेलियामा रहेका एक साथीले आफ्नो फेसबूक वालमा चकलेट पानीपुरीको फोटो राखेपछि उनलाई यसबारे जिज्ञासा लागेको रहेछ ।
नेपालमा पनि सोधखोज गरे । केही पत्ता नलागेपछि यसको रेसिपी थाहा पाउन युट्युबको सहारा लिनुपर्‍यो । सर्च गरे– ‘हाउ टु मेक चकलेट पानीपुरी ?’ खोजे अनुसारकै भिडियो युट्युबमा भेटियो ।
युट्युबबाटै तरिका सिके । त्यसपछि उनले सबैभन्दा पहिला विदेशी पर्यटकलाई लक्षित गरी ठमेलमा पसल खोले । उनको प्राथमिकतामा नेपाली भन्दा विदेशी पर्यटक नै थिए ।
ठमेलमा सोचे अनुसारको व्यापार भएन । त्यसपछि उनले सधैँ भीडभाड हुने वसन्तपुर क्षेत्रमा पसल खोल्ने निधो गरे ।
वसन्तपुरमा सानो सटर त पाए, तर भाडा भने निकै महङ्गो । महिनाको ४० हजार भाडा तिर्ने गरी पसल शुरू गरे । हाल दैनिक सरदर १५० वटा चकलेट पानीपुरी बेच्ने गरेको उनी बताउँछन् ।
‘भर्खर नयाँ लोकेसन हो । धेरैलाई थाहा पनि छैन । बिस्तारै आउँदै हुनुहुन्छ,’ सागरले आशा व्यक्त गरे ।
विदेश जानुभन्दा आफ्नै देशमा सानोतिनो व्यापार गरेर पनि आम्दानी गर्न सकिने उनको विश्वास छ ।
यसकै कमाइबाट बुवाआमा, दाजुभाइ तथा दिदीहरू सहित ७ जनाको परिवार पाल्दै आएको सागर बताउँछन् ।
खानेहरू पनि खुशी
बाफलका रमेश भण्डारी ६ जना साथी लिएर लोकेसन खोज्दै आएका रहेछन् । ‘विक्रम महर्जनले मैले चकलेट पानीपुरी खाएँ, तिमीहरू पनि खाने भए जाउँ भनेपछि आफूलाई रोक्न सकिनँ, साथीहरूलाई लिएर आएँ,’ भण्डारीले सुनाए ।
वसन्तपुरकी नितु महर्जन साथीहरूले इन्स्टाग्राममा फोटो राखेको देखेर आएकी रहिछन् । ‘चकलेट पानीपुरी यम्मी! भनेर साथीहरूले इस्टाग्राममा राखेका रहेछन् । आफ्नो घरनजिकै रहेको थाहा पाएपछि ठाउँ पत्ता लगाएर आएको नि,’ नितुले लोकान्तरसँग भनिन् ।
चकलेट पानीपुरी खाँदै गरेको भेटिएका हरि सापकोटा भने नियमित आउँदा रहेछन् । आफूले जर्मन साथीबाट यसबारे थाहा पाएको उनले बताए ।
‘हवर्ड फ्र्याङ्क नाम गरेको साथीले ठमेलमा चकलेट पानीपुरी पाइन्छ भन्दा मलाई अचम्म लाग्यो अनि खान गएको थिएँ । अहिले नियमित ग्राहक हुँ,’ सपाकेटाले भने ।
कसरी बन्छ चकलेट पानीपुरी ?
चकलेट पानीपुरीमा धेरै मात्रामा चकलेट तथा आइसक्रिमको प्रयोग गरिन्छ । ‘सामान्य पानीपुरीमा जस्तै भेराइटीहरू राख्नुपर्छ, फरक यत्ति हो, यसमा चकलेट र क्रिमको प्रयोग गरिन्छ,’ सागरले भने ।
सर्वप्रथम सामान्य पानीपुरीको पुरीमा चकलेट पगालेर जलप लगाइन्छ अनि आइसक्रिम, चकलेट र केकमा प्रयोग गर्ने क्रिम पुरीभित्र राखिन्छ । त्यसपछि सामान्य पानीपुरीको पानी राख्ने ठाउँमा मिल्कसेक, चोको चिप्सहरू राखेर एकैचोटी सबै मुखमा राखेर खान मिल्ने बनाइन्छ ।
महिनामा सरदर १ लाख ५० हजारको व्यापार हुने गरेको सागर बताउँछन् । सबै खर्च कटाएर ५० हजार जति बच्ने उनको भनाइ छ ।